01.05.2016 comments (0)
Madaxweynuhu maakayga gadaye ma Kiniini buu liqay?
Madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa ka dib safar uu ku tegey dalka Sucuudiga sheegay inuu heshiis dhanka maalgashiga iyo dhismaha kaabayaasha dhaqaalaha ee Puntland la saxiixdey Maal-qabeenka weyn ee kasoo jeeda qoyska Boqortooyada Sucuudi Carabiya laguna magacaabo Amiir Suldaan Bin Naasir Bin Cabdicasiis Aala Sucuud.
Warbaahinta madaxabanaan ee Dunidaonline.com oo u dhabagashay warbixinta Madaxwaynaha ayaa ogaatay in aanu jirin wax Mashruuc ah oo Sacuudigu u balanqaaday Puntland marka laga reebo, Mashruuc yar oo loo ogolaaday shirkad loo sharciyeeyay inay jiriifto xeebaha Puntland.
Hadaba waxaa is waydiin mudan, muxuu salka ku hayaa been abuurka baaxadaasi le'eg. waxaa hubaal ah in Madaxweyne Gaas ay garashadiisa la tahay in shacabka Puntland rumaysanayaan khuraafaadka intaasi le'eg, nin baa hore looga sheegay BEEN SHEEG OO WAX BEEN U EG SHEEG.
Qof kasta oo aasaas aqoneed leh wuxuu garan karayaa, in anay suuragal ahayn in shaqsiga maal qabeen ahi uu dhaqaalihiisa geliyo Deked, Garoondiyaaradeed iyo wado laami ah oo dhamaantood ku yaala dalka Soomaaliya oo ah wadanka ugu dambeeya Caalamka ee maalqabeen dhaqaalihiisa gelin lahaa.
Warka Cabdiweli ayaa intaasi raacinaya in maal qabeenku sidoo kale Wershado kalluunka qasacadeeya iyo qaboojiyayaal waaweyn ka hirgelin doono deegaano xeebeedyada Puntland ee ay kamidka yihiin Laasqoray, Baargaal, Xaabbo, Ayl iyo Garacad.
Madaxweynuhu ma wuxuu u qabaa dadka reer Puntland inay caamo ama caruur yar yar yihiin, mise isaga ayaa caqligiisu dhaafsiisnayn inuu waxaasi iyo kuwa la mid ah la soo shir tago, arinkan iyo kuwa kale oo la mid ah oo aan ku arkay dhaqanka Cabdweli Gaas qof ahaan waa iga yaabiyeen, waxaana hadalka uga baxayaa Madaxweynuhu maakayga gadaye ma Kiniini buu liqay?.
Qoraalkii Gaas soo dhigay Bogiisa:
Madaxweynaha Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo maalmihii u safar shaqo ku joogey dalka Sucuudiga ayaa heshiis dhanka maalgashiga iyo dhismaha kaabayaasha dhaqaalaha ee Puntland la saxiixdey Maal-qabeenka weyn ee kasoo jeeda qoyska Boqortooyada Sucuudi Carabiya Amiir Suldaan bin Naasir bin Cabdicasiis Aala Sucuud.
Heshiiskaasi ay kala Saxiixdeen Madaxweynaha Puntland iyo maal-qabeenka sucuudiga ayaa ah dhismaha Deked laga dhisi doono magaalada Garacad ee Gobolka Mudug, waddo laami ah oo isku xidhi doonta magaalooyinka Garacad iyo Galdogob, iyo dhismaha Garoonka Diyaaradaha ee Cabdullaahi Yuusuf ee magaalada Gaalkacyo.
Sidoo kale Madaxweynaha Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas iyo Amiir Suldaan bin Naasir waxay ku heshiiyey in Amiirku maal-gashada Wershado kalluunka qasacadeeya iyo qaboojiyayaal waaweyn oo laga hirgelindoono deegaano xeebeedyada Puntland ee ay kamidka yihiin Laasqoray, Baargaal, Xaabbo, Ayl iyo Garacad.
Maal-gashiga xoolaha nool iyo dugsiyo lagu baran doono xirfadaha kalluumaysiga, xannaanada xoolaha iyo beeraha ayuu sidoo kale ballan qaaday Amiirku in uu ka hirgelin doono deegaano kala duwan oo kamid ah gobollada Puntland, isla markaana waxaa laysla qaatay in heshiis kaasi sida ugu dhaqsiyaha badan loo hirgeliyo.
Madaxweynaha Puntland ayaa maanta oo Jimce ah laga sugayaa in uu ka dego magaalada Bosaso isaga oo habeenkii xalay u hoydey magaalada Adis Ababa ee dalka Itoobiya.